Tsy afaka manokatra ireo mailaka default anao. Ny rakitra dia tsy rakitra fisie ivelany.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Ny rakitra dia tsy rakitra fisie ivelany
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka "Ny rakitra tsy rakitra fisie ivelany"
Rehefa starting Microsoft Outlook, azonao izao hafatra diso izao:
Tsy afaka manokatra ny mailaka misy anao. Ny fisie xxxx.ost Tsy fisie fampirimana ivelan'ny tsipika.
Misy antony roa hahatonga an'ity lesoka ity toy izao:
The OST simba na simba ny fisie ary tsy eken'ny Microsoft Outlook, noho izany dia hitatitra an'io lesoka io i Outlook.
The OST Ny rakitra dia mifandray amin'ny boaty mailaka ao amin'ny mpizara Exchange. Raha misy antony, Microsoft Outlook dia tsy afaka miditra amin'ny mailbox Exchange na start mampifandray ny boaty mailaka amin'ireo lahatahiry ivelan'ny Internet ao amin'ny OST Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
1. Ao amin'ny Outlook, tsy napetrakao ny kaonty mailaka hidiranao tsara ny boaty mailaka Exchange.
2. Ao amin'ny Outlook, hofafanao ny kaonty mailaka an'ny boaty mailaka Exchange.
3. Ao amin'ny mpizara Exchange, ny mailaka Exchange, na ny kaonty mailaka ho an'ny boaty Exchange dia tsy mandeha na voafafa.
4. Misy olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny Outlook sy ny mpizara Exchange.
5. Tsy manana kaonty mailaka Exchange mihitsy ianao. Ary ny kaonty mailakao dia miorina amin'ny mpizara POP3, IMAP, HTTP na mailaka hafa fa tsy mpizara Exchange. Saingy nametraka ny kaonty mailakao ho mifototra amin'ny Exchange ianao.
Mba hamahana ity lesoka ity sy hisorohana ny fahaverezan'ny angona dia tokony hanao toy izao ianao:
Vonjeo ny angona ivelan'ny Internet ao amin'ny OST hametraka. The Exchange OST Ny rakitra dia misy tahiry ivelan'ny seranana, ao anatin'izany ny hafatra mailaka sy ny zavatra hafa rehetra, ao amin'ny boaty mailakanao Exchange izay tena ilaina aminao. Mba hanavotana ireo angona ireo dia tsy maintsy atao izany fampiasana DataNumen Exchange Recovery hijerena ny OST ataovy, avereno ny angon-drakitra ao anatiny, ary tahirizo ao anaty rakitra Outlook PST mba hahafahanao miditra amin'ireo hafatra sy zavatra rehetra miaraka amin'i Outlook mora sy mahomby.
Ampidino ny OST hametraka. Ho fitsinjovana ny filaminana dia aleo averinao alefa.
Amboary ny lesoka.
Raha mbola manan-kery ny boaty mailaka Exchange sy ny kaonty mailakao, dia tokony ho azonao antoka fa marina ny fikirakirana kaonty mailaka ao amin'ny Outlook, ary afaka mifandray marina amin'ny mpizara Exchange anao i Outlook. Avy eo azonao atao start Outlook ary andefaso / raiso ny mailakao amin'ny boaty mailaka Exchange, izay hahatonga an'i Outlook hamorona vaovao OST Asio rakitra ho azy ary ampifanaraho amin'ny boaty mailaka Exchange raha tsy mandeha io fomba io dia araho azafady ireo torolàlana ao amin'ny 5.2.
5.2. Raha tsy misy intsony ny boaty mailakanao Exchange na ny kaonty mailakao, na tsy manana kaonty mailaka Exchange mihitsy ianao, na tsy mandeha ny torolàlana ao amin'ny 5.1, dia diso ny mombamomba anao ankehitriny, tokony hamafana izany ianao ary mamorona vaovao, toy izao manaraka izao:
5.2.1 Tsindrio Start, ary tsindrio avy eo Takelaka fikirakirana.
5.2.2 Tsindrio Mivadika amin'ny Jery Klasika raha mampiasa Windows XP na kinova ambonimbony kokoa ianao.
5.2.3 Tsindrio indroa Mail.
5.2.4 Ao amin'ny Fametrahana mailaka fanovozan-kevitra, tsindrio Asehoy ireo profil.
5.2.5 Misafidiana iray amin'ireo mombamomba diso ao amin'ilay lisitra ary kitiho Esory mba hanesorana azy.
5.2.6 Avereno ny 5.2.5 mandra-pikatsoan'ny mombamomba anao tsy mety rehetra.
5.2.7 Tsindrio Add mamorona profil vaovao ary manampy kaonty mailaka arakaraka ny karazany avy.
5.2.8 A.tart Outlook, ho hitanao fa nanjavona ilay olana.